Isikhathi sesiphepho sango-2017, esisebenza kakhulu esikhathini esingaphezu kwekhulu leminyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngesikhathi se-2017 kube neziphepho eziningana ezidale umonakalo omkhulu, hhayi okokusebenza kuphela kepha nokulahleka kwabantu. Vele Irma, isigaba 5, esiqale ngo-Agasti 30 kuya kuSepthemba 15, sashiya ukulahleka kwezinkulungwane ezingama-118 kanye nokufa kwabantu abayi-127. Kwakubiza kakhulu kusukela ngoKatrina, 2003. Kepha ngeke sikhumbule u-Irma kuphela: kunamanye amagama okungeke kube lula ukukhohlwa, Harvey o María.
Ngempelasonto edlule besinakho Nate, esaba yisiphepho esishisayo esabhidliza iCosta Rica, iNicaragua neHonduras kuya esiphepheni sesigaba 1 esasongela iMexico nengxenye yolwandle lwase-United States. Ngalesi simo, okwamanje kuneziphepho eziyi-9 ezisebenzayo zesizini, esebenza kakhulu isikhathi esingaphezu kwekhulu.
Yize ukubhekwa kwakwenziwa ngomhlaba noma ngezikebhe, okwenza kube nzima kakhulu ukwazi ukuthi ngabe kwakha izivunguvungu eziyishumi ngonyaka, iqiniso ukuthi isizini ka-2017 isebenza ngokukhethekile e-Atlantic, kusukela okungenani ngo-1893. Kodwa kungani?
Ochwepheshe bebevele babikezele ukuthi le sizini izosebenza kakhulu kunokujwayelekile. Izinga lokushisa eliphakathi nendawo loLwandle i-Atlantic, kuhlanganiswe nento ebuthakathaka ye- I-El Niñosivumele iziphepho eziningana ukuba zakhe, ezinye zazo zinamandla kakhulu.
Ukulimala kwesiphepho uMaria ePuerto Rico.
Isithombe - Carlos García / Reuters
Iziphepho zidla ngokushisa kwezilwandle. Ukuphakama kwamazinga okushisa olwandle, kulindeleka ukuba kube neziphepho eziningi. Kepha, ngaphezu kwalokho, uma siqhubeka nokusebenzisa izilwandle njengendawo yokulahla udoti, ngeke nje sibeke impilo yezilwane zasolwandle engcupheni, kodwa futhi nokusinda kwethu uqobo. IPlastiki yinto eqoqa ukushisa futhi engakhuphula izinga lokushisa kwamanzi. Okwakamuva ukuthola yesiqhingi esisha semfucumfucu yepulasitiki ePacific, elingana neMexico futhi sikhulu kuneSpain, kufanele isisize ukubeka izinyathelo ezizosebenza ukuqala ukuhlonipha iplanethi esihlala kuyo.
Uma singakwenzi lokho, kuzofanele sizijwayeze izehlakalo zezulu eziya ngokucekela phansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Isikhathi sesiphepho sango-2017, esisebenza kakhulu eminyakeni engaphezu kwekhulu